MAGNETIC ISL•2bed2bath apt•Ixabiso elikhulu•Iimbono ezintle - I-Airbnb
MAGNETIC ISL•2bed2bath apt•Ixabiso elikhulu•Iimbono ezintle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNgairie
*** Imbuyiselo epheleleyo ukuba awukwazi ukuhamba ngenxa yezithintelo ze-covid ***
I-Wifi yasimahla engenamda!!
Isandula ukubonelelwa ngegumbi lokuhlambela elineebhedi ezi-2 eNelly Bay, kwiSiqithi saseMagnetic.Le ndlu ilungele iintsapho okanye izibini ezi-2. Eli fulethi, i-1407, likwi-Bright Point li-100m ukusuka kwisikhululo senqanawa kunye nesikhululo sebhasi senza ukuba kube lula ukukhwela nokuphuma esikhitshaneni ngaphandle kwesithuthi. 1 x Khusela ipaki yemoto efihlakeleyo.
Ibhedi yohambo OKANYE umatrasi womoya womntwana om-1 owongezelelweyo iyafumaneka xa uyicela ngentlawulo eyongezelelweyo
Eli fulethi linazo zonke iimod-cons, ezisanda kunikwa izinto ezongeziweyo: - ifriji egcweleyo kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, umatshini wekofu we-espresso, iithoyi zabantwana zaselwandle kunye neethoyi zamachibi, iwasha, isomisi, i-air-conditioning ngokupheleleyo, iTV edlala iDVD kunye iiDVD zabantwana, kufutshane nechibi kunye nezixhobo zeBBQ ezinolwandle kunye neembono zentaba ukusuka kwibalcony ebanzi kumgangatho we-4.
Ulungelelwaniso lwegumbi yi-1 x Queen kwi-Master Suite ene-ensuite kwaye nokuba yi-2 x single okanye 1 x King (nceda ucacise ukuba oku kukhetho lwakho njengoko iibhedi zenziwe ngenye indlela njenge-2 x singles) Sikwanayo ne-port-a-cot ekhoyo isicelo, ukuvumela ukuya kuthi ga kwi-2 yabantu abadala, abantwana aba-2 kunye nosana olu-1.Kungenjalo, sinofikelelo kumandlalo womoya olukhetho lomntwana omdala wesi-3.
4.85 · Izimvo eziyi-225
Isiqithi saseMagnetic sinobubele kwaye sinobuhlobo kwiintsapho, abakhweli, izibini ngokufanayo zifuna ukubaleka kwisiqithi esitshisayo.Abantu balapha banobuhlobo kwaye isiqithi sinokuninzi esinokunikela ngeendawo ezimangalisayo. Ukuba unethamsanqa usenokubona ikoala endle kwenye yeendlela ezininzi ezimangalisayo zokuhamba.Kwakhona gcina iliso kwiminenga kunye nofudo ngexesha lokuhlala kwakho. Qhagamshelana nam ukuba ungathanda naziphi na iingcebiso malunga nokubona kwaye wenze kwisiqithi okanye iindawo ezilungileyo zokutya nokusela!
Umbuki zindwendwe ngu- Ngairie
Qaphela ukuba amaxesha okungena/ukuphuma angaguquguquka ukulungiselela iimfuno zakho kwaye ngokuxhomekeke ekufumanekeni.Rhoqo sinokuvumela ukungena kwangethuba ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo OKANYE ukhetho lokulahla umthwalo kwigumbi. Nceda ucebise ngeemfuno zakho kwaye siya kuzama ukukuhlalisa kangangoko sinakho!
Qaphela ukuba amaxesha okungena/ukuphuma angaguquguquka ukulungiselela iimfuno zakho kwaye ngokuxhomekeke ekufumanekeni.Rhoqo sinokuvumela ukungena kwangethuba ngaphandle kwentlawu…